Dugara ọkụ Manufacturer & Supplier | Ming Feng
Kedu ka m si eme?
Kedu ka mf si eme SMT mgbawa?
Otú MF na-ese ihe?
Kedu ka mf si mepụta gia?
Olee otú MF si emepụta ụlọ?
Ewe Mgbakọ MF?
Kedu ka lens dị iche iche?
Olee otú MB nke MF si arụ ọrụ?
Ime ụlọ Light
Dugara Ogwe Light
Ikanam Light Light
Ikanam Down Light
Ikanam N'uko Light
Ikanam ìhè Light
N'èzí Dugara Light
Mere High Mast Light
Ikanam Garden Light
Mere Bọmbụ gbawara agbawa Gosiri Light
Ikanam Wall Washer Light
Dugara oche Light
Lightlọ Akwụkwọ Light School Na Austria
Super Market Light Project Na Canada
Ọwara Light Light Na Australia
Egwuregwu Light Stadium Na South Africa
Ebe a na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala na Japan
Street Light Project Na .tali
Nkwakọba Lightlọ Ọrụ Na German
Ngwunye Ọkụ Na-agba Ọsọ Na France
Lightlọ Ọrụ Light Hotel Na Poland
Mini Down Light Project Na Brazil
Ọnụahịa ụlọ ọrụ
Oge Ndu Ọsọ
Ekwu Na 24h
Iso9001 Ogo System
Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ
Ọrụ Nhazi Ìhè
Kedu ka ngwaọrụ ngwaọrụ ebu?
Kedu ka mf si eme CNC na Polishing?
Kedu otu MF mepụtara oghere?
Otú Mf Mee nká?
Olee otú Mf Jikwaa ebe nkwakọba ihe?
Otú MF na-ese eserese?
Ndị ahịa Bangladesh na-eleta Mf
Israel gara Mf
Nleta Netherland Mf
Mmemme Ọzụzụ Mf
Mf Gị Gz Lightingfair
Ndị Injinia Mf Na-eleta Eu
Mf Ọzụzụ Na Hz
Mf Road Map 2021
Japan Client Gaa Mf
Onye ọrụ ngo Italia nleta Mf
Mf Egwuregwu bọọlụ
Mf Kporie Bbc
MF mmepụta usoro bụ ISO9001 akwụkwọ, Kpọọ anyị na
Factory Price-ISO Ogo
N'IHI gịnị MF?
1. Mingfeng Lighting nwere nnukwu ọkụ ọkụ ọkụ na usoro nyocha nke mma, usoro MF na-arụ ọrụ tupu mmepụta, usoro mmepụta, na usoro nyocha siri ike dịka AQL si emeputa. All MF Ikanam ọkụ na-ewe mbịne na ule 100%, na-ere ọkụ ule na-enweghị nkwụsị si 48 ka 72 awa.
2. Dị ka a ọkachamara Ikanam ọkụ emeputa na afọ 15 ahụmahụ na okwu nke imewe, mepụta na reengineering, Anyị factory specializes na ada ọkụ N'ogbe, na anyị ọkọlọtọ ngwaahịa awade a nkwa oge nke 5 afọ, ụfọdụ ngwaahịa evan enye a nkwa oge nke 10 afọ ndị ga-etinye aka na ọrụ ahụ
& mkpa onye ahịa. Oge ndu maka ntinye bụ izu 1, yana izu 2 maka nnukwu iwu.
3. Usoro mmepụta ihe anyị bụ na anyị anaghị etinye aka na ndị na-ere ahịa, ndị nkesa, ndị ahịa, na ndị ọzọ, n'ihi nke a, Ming Feng Lighting Co., Ltd dịka onye nrụpụta ọkachamara nwere nnukwu uru na ụgwọ / ogo / arụmọrụ. All ngwaahịa na-Ẹnam ekese kpọmkwem site MF factory.
4. Ming Feng Lighting Co., Ltd nwere otu ìgwè ndị injinia nwere nkà na R& D, na ndị ọkachamara na-ere ahịa mba ụwa iji nweta nkwurịta okwu na-aga nke ọma, MF na-enye ndị ahịa anyị dị oké ọnụ ahịa ọrụ ọkụ ọkụ. N'okpuru ọrụ ndị ahịa anyị, ndị ọrụ injinia anyị na-enye ntụnye nke akara ngwaahịa, mee ngụkọta ọkụ na usoro nke ROI (Retrun nke Investment) dịka eserese eserese ihe osise, na ROI dị ka ịnye atụmatụ nchekwa nchekwa iji belata ọnụahịa ọkụ ma hụ na ọkụ Ntinye ego nke ntinye ego na-erughị afọ 1.5 (ụfọdụ, enwere ike weghachite itinye ego ọkụ n'ime afọ 1 n'okpuru ọnọdụ ọrụ ahụ).
Enweghị onye ọ bụla dị n'etiti, get nweta ọnụahịa ụlọ ọrụ kpọmkwem site na MF. Ndị ahịa na-anọ n'ọnọdụ kachasị mma na ahịa mpaghara site na ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị.
All ngwaahịa na-emepụta 100% n'okpuru ISO usoro, nile di iche iche nke smart igwe nọrọ ná nchebe mma ọkọlọtọ 200% ọma executived.The quality atule usoro kpọrọ ọrụ ha dị ka ilekọta anya ha.
Oge zuru oke
1 izu maka sample iji.
Izu 2 maka iwu buru ibu.
Izu 3 maka ihe ahaziri.
Afọ 5 maka ọkụ ọkụ n'èzí
Afọ 10 maka ọkụ n'èzí (N'ọnọdụ)
Akwụkwọ ikike bụ akwụkwọ ikike.
Anyị na-amị ìhè n'ihi na ihe karịrị afọ 10
1.LED Panel Light 2.LED Down Light 3.LED Track Light 4.LED Triproof Light 5.LED High Bay Light 6.LED Track Light.
Ikanam N'èzí Light
1.LED Light Light Iju Mmiri 2.LED High Mast Light 3.LED Stadium Light 4.LED Street Light 5.LED Light Light
6.LED Bọmbụ gbawara agbawa Gosiri Light. 7. Ikanam Wall Washer Light 8.LED kanopi ìhè 9.LED Ọwara Light 10. Ikanam Abù Light
A na-eme ka ìhè ide mmiri dị maka àkwà mmiri, ebe a na-egwuputa ihe, egwuregwu na-eme egwuregwu na ọdụ ụgbọ mmiri. Ezinaụlọ a dị mma na arụmọrụ site n'enyemaka nke ihe eji egwuri egwu na akụrụngwa ụwa, afọ 5 dị ka mgbe niile.1. Ndozi ụzọ na-eduzi anya:① Ntugharị na SymmetryOriọna ahụ na-agbachitere ntụgharị uche na-atụgharị uche, yana akara akara nke isi iyi ọkụ na-etinye nkesa ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe na axis nke onye na-atụgharị uche. Ihe na-enye mmanụ dị iche iche nke oriọna dị otú ahụ bụ ihe.Mgbe otu oriọna, a na-enweta ụdị oriọna a na-enwu na elu elliptical na elu ahụ na-enye ìhè, ọkụ na-adịghị mma; Agbanyeghị, mgbe ọtụtụ oriọna dị ọkụ, a na-ekpo ọkụ na ibe ya, nke nwere ike ime ka mmetụta na-adịghị mma. Iji maa atụ, a na-ejikarị ọtụtụ narị nke na-atụgharịgharị anya na-ebugharị oriọna, nke etinyere n'elu ụlọ elu dị elu iji nweta ìhè dị elu na mmetụta na-enwu ọkụ.② symmertical clar ochieIhe na-atọ ụtọ maka ụdị oriọna a nwere ụgbọ elu abụọ usoro. Imirikiti orings na-agbaso sylindrical na-atụgharị uche, na Linear Light Light na axistical axistical axistical.③ a ogbo pireTricalIhe a na-eji teepunụzọ oriọna nke oriọna ahụ nwere naanị otu ụgbọ elu nke symmetrical. A ga-eme oriọna nke asymmetrical na cylindrical na-eme ka oriọna ma ọ bụ cylindrical na-agbakwunye oriọna iji gbochie ọkụ * a na-ahụkarị ebe a na-ahụkarị. E nwere ụdị nkesa nke na-ekesa ahụ nwere ike ịnweta nkesa nke na-enye afọ ojuju na otu oriọna.④ AsymmetricIhe na-enye mmanụ dị iche iche nke oriọna ndị dị otú ahụ enweghị ụgbọelu. Ọ na-ejikarị oriọna dị mfe nke nwere ụdị ìhè dị iche iche na nnukwu ọdịiche dị na ike dị egwu na mgbanaka dị iche iche na oriọna pụrụ iche nke edoziri dị ka nke na-enweghị ọkụ nke ebe.2. Njirimara nke oriọna Mmekọ:Oru nke kachasi ike na-eji ike eme ihe (ihe eji eme ihe na-eme ka ọ dị elu nke nke PMMMMA, nke a na-ekesakarị ya nke ọma, nke ahụ bụ, ihe enyemaka nke abụọ); Companieslọ ọrụ ole na ole na-ahọrọ 3W ma ọ bụ aka dị elu na-ewute n'ihi na teknụzụ na-ekpo ọkụ. Oriọna na-eduzi ihe dị mma maka nnukwu oge, ụlọ na ọkụ ndị ọzọ.
A na - eme ka ngwaahịa ọkụ na - eme ka ihe dị na nchekwa nke ndị na - azụ ahịa.Anyị kwesịrị ime ka ọmụmụ ihe na nyocha nke iwu mba ofesi sikwuo ike, ịchịkwa ịdị mma nke ngwaahịa na iwepụ ihe ọghọm dị iche iche;Mee ka mmekorita ya na ulo oru nyocha nke ndi ozo na ndi oru nyocha nke ndi oru, soro ogo nke ihe omuma nke imeputa ihe nile,Ma nyochaa usoro niile site na imewe ngwaahịa, imepụta, usoro igodo, nchọpụta nke mbụ iji rụchaa nyocha ngwaahịa.Starlọ ndị isi kwesịrị ị paya ntị karịa na ngwaahịa ngwaahịa ma ekwesịghị ichefu ohere mmepe maka nsogbu dị mma. Dị ka ụlọ ọrụ na-enye ìhè ma ọ bụ akụrụngwa na-akwado ndị na-ebubata ya, a ga-aghọta akụrụngwa ma ọ bụ atụmatụ ndị a!
Otú MF na-emegharị
Ming feng kacha mma ka anyị si eme ihe na-eweta, Asambodo Universal na-enyere ngwaahịa anyị aka nri n'efu, onye ahịa nwere ike ibubata site na ụlọ ọrụ MF na nnukwu ọrụ.A na-eji igwe eji ghọta ihe na-agbazi usoro mgbasa ozi dị iche iche, nke bụ usoro mgbanwe anụ ahụ. Nke mbu, isi ngwụcha nke Wire ọla edo ga-etolite na-etolite (mf na-eji nrụgide na-adịghị mma iji mepụta oghere), na elu igwe ga-ebu ụzọ mee ka ọ bụrụ nke mbụ; Mgbe ahụ, n'okpuru nkwonkwo na nrụgide, Bọọlụ ọla edo na-arụpụta mkpọchi plastik n'elu, na site na ịgbakwunye mkpọsa nke a pụrụ ịdabere na ya, a na-ehiwe nke ọma n'etiti atọm abụọ N'okpuru ime ihe nke atomic mmekọ, ka ha wee mata ịgbado ọkụ waya na-eduga. Ihe ndị na-agba aja aja na-agba aja aja dị elu dị elu na-agba aja aja na ngwa ebe a na-arụ ọrụ na ngwa eletriki, ọ bụ ezie na a ga-emerịrị ọla dị oke mkpa, a ga-emerịrị ihe ndị dị oké ọnụ ahịa.
Ozọ MF na-ese eserese?
Gịnị bụ usoro nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi?1, agba mbata usoro, usoro a na-eme na-eche maka ọtụtụ ndị na-eche na achịcha achịcha bụ usoro ọgwụgwọ, n'eziokwu, ọ nweghị ike hiere ụzọ. Na omume, enwere ike ikwu bakide agba ka ọ bụrụ ihe mkpuchi na usoro. Usoro ihe osise nke agba zuru ezu bụ: A na-etinye ihe osise oge niile na mkpụrụ, a na-eziga ya n'ime mmiri mmiri na-enweghị mmiri, nke a na-eme ugboro ugboro, ugboro anọ ma ọ bụ ugboro anọ.2, agba mbata usoro agba agba agba agba agba na ime ụlọ achịcha bụ ụdị ngwa ọrụ mmepụta ihe. Ihe owuwu ya sochiri. Ahụ dị n'ime ụlọ ahụ bụ nwatakịrị na nne na-arụ ọrụ mkpuchi na plastik sprayingboard, nke nwere ezigbo akara na arụmọrụ mkpuchi. Enwere ụzọ na-arụ ọrụ n'akụkụ ụlọ iji kwado ohere ndị ọrụ. A na-ejikwa ya na-enwekwa ọnụ ụzọ allinium nke dịịrị ọnụ, na ụzọ ụzọ dị na windo nlele. Ọrụ ya bụ iji rụọ ọrụ mmiri.3, na n'ikpeazụ, na-akpata primer ahụ ugboro ugboro ugboro 3-5. Mgbe ọ bụla spraying, Polish na agba na agba na ájá na akwa a na-ata ahụhụ. Mgbe eserese, metụ elu nke oriọna nke aka gị iji hụ ma enwere ntụ na uzu nta. Ala oriọna na-acha odo odo ga-adị larịị ma na-acha uhie uhie na-enweghị mmetụta na-adịghị mma.4, agba mmiri, fesa 1-3 ugboro nke na-enwu gbaa agba, wee mee ya na ọnọdụ okpomọkụ iji mee ka ọ dịkwuo elu. Mgbe nke ahụ gasị, pịa na ihe siri ike. Ihe osise na-eme ka ọ ghara ịbụ ihe nkiri, ihe nkiri na-acha ọcha na-ada, akpụkpọ ọcha na-ada ada na ihe nkiri ndị ọzọ na-enweghị atụ agaghị emebi emebi.
Ming Feng Lighting Co., Ltd. Njikọ
Mingfeng Lighting Co., Ltd. bụ a ikanam Lighting emeputa ike 2006.
Ngwaahịa anyị gụnyere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ mmiri ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ mmiri n'ime ụlọ. Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji na-ọnụ ọgụgụ ọkụ usoro eji na nnukwu ugbo, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ akwụkwọ, àkwà mmiri, tunnels, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọelu, na ọtụtụ ndị ọzọ ngwa. Mingfeng specializes na elu-edu dugara ọkụ N'ogbe. Mmadụ Bịa na ileta anyị factory.
Ntọala Estlọ Ọrụ
Ihe ọkụ ọkụ
Ebe a na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala na-eji ọkụ anyị na-eme ka ọ dị mma na-enye ihe ọkụ ọkụ 2x54w, ọ na-arị elu na-abawanye mgbe a na-adọba ụgbọala n'okpuru okpuru ulo.Ka ọ dị ugbu a, MF na-enye TUTE TUBE na ngwa ndabara maka ịchekwa ọtụtụ ebe.Ọnọdụ ebe a na-adọba ụgbọala nke dị ugbu a: na-eme ka ọkụ nke na-adọba ụgbọala dị n'okpuru ala, nsogbu na-enwu jụụ ndị mmepe na ndị ọrụ, tumadi na akụkụ ndị a:1. Ebe a na-adọba ụgbọala n'okpuru ala bụ ebe gbara ọchịchịrị. Ọ bụrụ na ọkụ adịghị ka oge na-aga, ihe ọghọm dị mfe ịme. Ọzọkwa, ndị mmadụ na-agafe agafe dị obere, nke na-enyekarị ọnọdụ dị mma maka ndị omekome ma bụ mpaghara adịghị ike nke njikwa nchekwa.2. lightdị ọkụ dị oke ọnụ. General Wargage Withring mkpa awa 24, yana ụgwọ ọkụ eletrik na-eme kwa afọ.3. Ọnụ ọgụgụ ndị na-adọgagasị na-adọba ụgbọala buru ibu, na ọrụ nke ndochi na mmezi dị ukwuu, nke bụ ihe isi ike na njikwa ihe.Ọnọdụ ugbu a tupu mgbanweIhe a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka mmadụ nwee ọgụgụ isi nke ọma na-eme nke ọma n'etiti ọkụ na-enwu ọkụ na-enwu ọkụ na-enwu ọkụ na nchekwa nchekwa na nchekwa ike, yana ike ịchekwa ihe dị ka 85%. Ewu na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala:Ntinye ngwa ngwa Radar na-ebugharị oriọna nke na-eji usoro doppler na-ebugharị ngwa ndapụta na-eme ka ọ na-ebugharị. Mgbe usoro ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na nhazi, mgbaàmà na ike ọkọnọdị na-etolite ngwa ndakwa ikuku na-ebugharị oriọna na-ebugharị. Oriọnada ebedara a ga-adọta nwere ike ịchọpụta gburugburu eletriki na-akpaghị aka na-arụ ọrụ na-akpaghị aka.Ogwe oriọna nke radarNjirimara na-arụ ọrụ nke ngwa ndapụta na-abanye oriọna:Mgbe mmadụ ma ọ bụ ụgbọ ala na-akpali, oriọna na-ahụ maka ebe a na-adọba ụgbọala dị 100% na, ike ọrụ bụ afọ 18W, na-enwu enwu bụ okpukpu abụọ nke oriọna 40w fluorescent ugboro abụọ. Mgbe onye na-agagharị na ụgbọ ala, mgbe egbure mmadụ iri abụọ na ise, oriọna nke radar na-enwu gbaa, ike na-arụ ọrụ na-enwu enwu na-enwu ọkụ 5w. Icha mgbe ọ na-enwu gbaa nwere ike iji mezuo mkpa nchekwa, nlekota na ọkụ. Ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ ụgbọ ala na-aga na mpaghara a, oriọna na mpaghara a na-abụkarị 100%. RADAR na-ahụ maka ebe a na-adọga ebe a na-adọkaghị na-ekpuchi ogo 360 n'okpuru ọkụ, na ihe mmetụta dị iche iche bụ 6-8m. Nke ahụ bụ, mpaghara nwere radius 6-8 na ndị mmadụ na ụgbọ ala dị ka etiti nke gburugburu bụ ihe na-egbuke egbuke.Ihe osise atụmatụ nke radar IndectionUru ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Rapar Randar Induction Blar1. A na-echegharị ihe ndị dị ka ndị mmadụ na ụgbọ ala, ma na-enye ọkụ kwesịrị ekwesị na oge a chọrọ. Ndị mmadụ na ụgbọ ala na-abịa ma na-enwu, ndị mmadụ na ụgbọ ala na-aga Ìhè dịtụ ntakịrị, na-akpaghị aka, na-agbanwe ọkụ na ihu igwe "na-enwu enwu na awa 24 gara aga.2. A na-etinye ngwa nke Light Light na oriọna nke Radar na-edenyekwu uru na beds nke Band: ogologo ndụ, arụmọrụ dị elu, obere olu na njikwa dị mfe. Ọ na-ezere ihe ọghọm nke oriọna ndị nkịtị: Enweghị ọdịda dị ọkụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, oke ndụ dị elu, na-echekwa ọtụtụ ụgwọ ọrụ na ụgwọ ọrụ, na akpaka Indection na-eweta ezigbo mma.
Ìhè nke MF bụ ihe zuru oke iji Ìhè, na-acha uhie uhie na-enwe mmasị oriọna anyị na-amasịkarị nke ukwuu, ìhè dị mma n'abalị na-eme ka ịnyịnya ha nwee ọ theụ ogologo ụbọchị niile.Ọgba aghara ahụ kwesịrị ịbụ onye na-eme ka ọ dị mma maka ụzọ ịnyịnya na-aga n'ihu, ọ ga-agbanwe ihe ize ndụ nke ịnyịnya na-agba ịnyịnya, yabụ ịkwesịrị inwe ihe pụrụ iche maka na-enwu gbaa.Ming Feng Fengforce Ezinụlọ jirị oriọna egwuregwu nwere ike dochie anya oriọna nwere ike dochie anya ya na 1 60%, na -ebelata ikike oriri na ihe inyeaka. Ndụ ọrụ nwere ike iru ihe karịrị awa 60000 na akwụkwọ ikike ahụ bụ afọ 10. E jiri ya tụnyere ebe oriọna na-egbu egbu na-eme ihe dị ka awa 3000 ~ 5000, mmezi ahụ na-ebelata nke ukwuu, iji chekwaa ego mmezi ahụ. N'otu oge, oriọna ọla edo na-amalite ogologo oge, ọ na-ewe minit 30 iji weghachi ọkụ ahụ ma ọ bụrụ na ebe a na-atụfu ike ma weghachi ike ọkọnọ. Enwere ike ịgbanwuo oriọna nke duru na ya, zere kpamkpam nsogbu nke ihe nkwụsịtụ egwuregwu ogologo oge nke ọdịda ike na mberede.A ga-amata usoro ihe atọ na-agbanwe agbanwe, mgbanwe na vetikal nwere ike ịghọta, na-esochi obi.Otu ụzọ nrụnyeỌ dị mma maka nnukwu egwuregwu, ski bartor, ọmụmụ Golf, ọmụmụ ịgba ọsọ, ọmụmụ ihe na ebe ndị ọzọ, ma na-ezute ihe ndị na-eme ihe nkiri n'ụlọ na mba ọzọ.Taa, na -aga nwayọọ nwayọọ nke ije nke mba, ọkụ a aụla ihe dị mkpa na-emetụta ngosipụta zuru oke ụdị ihe omume agbụrụ niile. Dị ka ọsụ ụzọ dị na mbara igwe dị elu, Ming FED na-enwu ga-anọgide na-akwalite R& D na ihe ọhụrụ nke ngwa ahịa na-eme ka ọkụ dị ọkụ na-eme ka ọkụ na-azọpụta, ma na-eme mgbalị nke na-arụ ọrụ maka mmepe nke ụlọ ọrụ dị egwu
Ming feng na-akpọpụta ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na South Africa na-aga n'ihu na South Africa, ndị ahịa na-akwado ya site na ịhụ ihe agbanweela iji oriọna ochie, ọ na-echekwa ọkụ eletrik.Dabere na onye ahụ na-ahụ maka ịkwalite mmelite na nrụzigharị egwuregwu nke egwuregwu bọọlụ Johannesbudg na-emepụta usoro ngbanwe nke okporo osisi asatọ dị na mbara ihu nnwale. Mkpokọta nke na-ebugharị usoro nke ụbọchị na June 23, ọkụ asatọ ahụ dị na June 23. dị iche na egwuregwu egwuregwu Johannesburg Olympic Sport na-eme njem Stadiumlọ egwuregwu egwuregwu ahụ nwere akụkụ asatọ "nnukwu mac" mita dị elu (51 mita nke okporo osisi, gbakwunyere mita 2 nke mkpụrụ osisi). Emechara ibulite elu na afọ a, na oriọna nke ọ bụla na-atụ 4 tọn, olu nke 8 na-ebuwanye atụmatụ egwuregwu dị egwu dị ụkọ na mba ahụ.
Emechara oru ngo ahia nke Kanada na 2016, oru ngo a choro anya di egwu na-ejide oke nlebara anya iji gboo nlebara anya ka ịzù ... ka aga-aga n'ihu.Site na ụlọ ọrụ ntanetị a ma ama, maka ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ ihe ịma aka. A na-akọ na na ọkara mbụ nke 2016, enweghị ọtụtụ ụlọ ahịa nwere nnukwu ụlọ ahịa na-enweta uto abụọ na ego na uru. Ya mere, ọ dị mkpa iji gboo mkpa nke ndị ahịa ndị ahịa dị iche iche na ụdị azụmahịa dị iche, na ogo na ahụmịhe nke ụlọ ahịa na-adị mkpa karịa.Lightning bụ otu n'ime akụkụ ndị ụlọ ahịa iji melite ogo ma nwekwuo mmetụta nke ahụmịhe. Nnukwu ụlọ ahịa chọrọ ọkụ na ndo. Ezi ìhè na-eme ka ọ bụrụ ihe dabara adaba nwere ike ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa ma mee ka nkasi obi; Ming FED na-enye ihe ngwọta na-enye ihe ọgbụgba dị iche iche nke ya, nke nwere ike ime ka uto dị iche iche gosipụta ya, mụbaa ịzụrụ ma melite mmetụta niile dị na nnukwu ahịa.A na-ekewa ụlọ ahịa na-ekewa na ụdị atọ ndị aOru oriọna: Ọ nwere ike inye ngwongwo dị mma maka ngwongwo na shelf; Igwe na-enwu ọkụ dị elu dị elu, mana oghere ihu igwe na otu adịghị mma, nke na-adịghị mma maka ndozi nke ikpo mkpọ.Onyunyo vetikal Vetical: Ọ nwere ike inye ezigbo ọkụ na mbara igwe, yana ọkụ na-alụbeghị di, ma na-enweghị echiche nke ndị nduziOriọna kwụ ọtọ: Ọ nwere ike inye ezigbo oriọna na mbara igwe, yana ịdị elu, mmetụta siri ike nke ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ma ọ bụrụ na ọ ga-akwụ ngeta na lanare.Eleghị anya ndị ahịa na-elebara ndị ahịa aka na-adọta ebe nwere ikuku dị mma. Naanị na gburugburu ebe obibi nwere ike ịhụ ebe ndị na-enwu gbaa. Na usoro na-enwu ọkụ nke ụlọ ahịa Boutique, ọkụ niile bụ igodo. Mgbe ikpebichara mmekọrịta dị n'etiti ọkụ na ndo, ịchịkwa ọkụ na-adị ezigbo mkpa. Ọnọdụ na nrụnye nke oriọna kwesịrị ichebara ịdị mma na ndozi, na-enwe nchegharị na nke na-egbuke egbuke n'otu oge. Maka ụzọ ngosipụta dị iche, ọkụ ọkụ na-efe efe.
Ka anyị kwuo
Biko Hapụ kọntaktị gị ebe a ka Injinịa Ahịa anyị ga-anọ na Ọrụ Gị n'oge na-adịghị anya